मार्क्सवादी र लेनिनवादी दर्शन, जनताको मुक्तिको लक्ष्य र सिद्धान्त बोकेर लक्ष्य निर्धारण गरेका नेपाली कम्युनिस्टहरूले देशमा जनताको आकांक्षा अनुसार विकास र समृद्धि देखाउन सकेनन् । नेपाली जनताका रोजगारी, आवास, सामाजिक न्याय र विकासको सपना साकार अझै भएको छैन ।
नेपाली युवाहरूको श्रम बजार स्वदेशमा विकसित हुन सकेको छैन । भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादविरोधी लोकप्रिय नारा लिएर राजनीतिमा निकै दशकदेखि सक्रिय नेपालका वामपन्थीहरू भारतलाई विस्तारवादी चरित्र माने पनि त्वं शरणम् गरिरहेछन् । र अमेरिकाको साम्राज्यवादी नीतिलाई चुनौती दिन त उनीहरूले झनै आँट गर्न सकेको देखिँदैन ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले पिछडिएका, दलन र विभेदमा परेका महिला र उपेक्षित वर्गका लागि बोलिदिएको चाहिँ छ । महिलाहरू र उपेक्षित वर्गविरुद्ध रहेका धार्मिक, सांस्कृतिक र परम्परागत तगाराहरूलाई धेरै मात्रामा भए पनि हटाउने लडाइँ भने उनीहरूले लडेकै हो । विगतमा निरंकुश व्यवस्थामा आफ्नै ज्यानको परवाह नगरी जनतामा चेतना जगाउँदै, शोषणकारी र विभेदकारी प्रणाली र सामाजिक विसंगति विरुद्ध आवाज बुलन्द पार्दै, जेलनेल र यातनाको भयावह अवस्थाबाट गुज्रेर जनताको मुक्तिका खातिर दिएको बलिदानी योगदानको कारणले कम्युनिस्टहरूप्रति जनताको आज पनि उत्तिकै विश्वास छ ।
जनतालाई पूर्ण न्याय दिन भने ‘समय लागेको’ छ । यस्तै सकारात्मक चरित्रले गर्दा नेपालमा वामराजनीतिप्रति आम चासो र आकर्षण रहेको छ । कम्युनिस्ट दर्शन, यसमा रहेका विचारधारा, मापदण्ड र सिद्धान्तमा रहेका समतामूलक न्याय र सामाजिक न्यायका प्रतिबद्धताहरूबाट आकर्षित भएर कम्युनिस्ट पार्टीमा झुकाव राख्नेहरूको नेपालमा उल्लेख्य संख्या छ । नेपाली समाजको रूपान्तरण र राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनमा वामपन्थीहरूको योगदान उल्लेखनीय छ ।
यति सकारात्मक पक्षहरू भएता पनि नेपालको राजनीतिक उतार चढाव र अस्थिरताको चपेटामा वाम राजनीति अछुतो रहन सकेन । नेपालको विशिष्ट धरातल, नेपाली जनताको प्रवृत्ति र नेपाली स्थितिमा कम्युनिज्मको यथार्थपरक स्वरुप निर्धारण गर्न सकेको छैन । यति लोकप्रिय तथा दुःखी जनताको आशा भरोसाको केन्द्र भएर पनि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी टुटफुटमा अभ्यासरत भए । यी टुटेफुटेका र आ आफ्नो राजनीतिक ताल बजाइरहेका फरक नेताका फरक लक्ष्य छन् । सामाजिक न्याय र आरक्षणको आधार जाति कि वर्ग ? यस्ता कार्यनीति निर्धारण गर्न समेत सकेको छैन । कम्युनिस्ट नेताहरू फरक दर्शन र सिद्धान्त लिएर वादविवादमा अल्झिरहेका छन् जसको मूल्य देश र जनताले चुकाउनु परेको अवस्था छर्लङ्गै छ ।
वामपन्थीहरू आफ्नै तालमा आफ्नो चाहिँँ सिद्धान्त र दर्शन उत्कृष्ट भएको अहङ्कारबाट अर्काे वामपन्थीलाई बदनाम गर्ने र मास्ने हर्कत गरिरहने, सिङ्गो वामशक्ति अभिमान र अहंकारको पर्याय बनेर कम्युनिज्म र वाम आन्दोलनको बदनाम गर्दै नेपालमा कम्युनिस्टको अस्तित्व सिध्याउने प्रतिस्पर्धामा लागेको देखिन्छ । यो चाला नसच्याउने हो भने नेपालमा कम्युनिस्टको अस्तित्व सकिने सम्भावना केही टाढा छैन । कम्युनिस्ट आफू आफू जुधेर एकातिर जनताको आस्था र विश्वासमा पहिरो मात्रै गएको छैन, आफैँ अग्रमोर्चामा रहेर हजारौँ होनहार युवाहरूको ज्यानको बदलामा पाएका उपलब्धिलाई जनताको हितमा प्रयोग गर्न नसक्दा जनताको नजरबाट गिर्नु र विश्वास गुमाउनु कुनै पनि दलको लागि घात हो ।
हजारौँको बलिदानबाट ल्याएको परिवर्तन समेत निरर्थकझैँ भएको छ । आज बलिदानबाट आएको लोकतन्त्र धरापमा परेको छ । प्रतिगामीहरूले ठाउँ पाएका छन् ।
यसरी हजारौँको बलिदानबाट ल्याएको परिवर्तन समेत निरर्थकझैँ भएको छ । आज बलिदानबाट आएको लोकतन्त्र धरापमा परेको छ । प्रतिगामीहरूले ठाउँ पाएका छन् । प्रतिगामी र जनताको हक अधिकारको बाधकहरू निकै सल्बलाएकोे स्थिति पनि देख्न थालिएको छ । यसरी लोकतन्त्रवादी र जनवादी भनिने पार्टीहरू आफू आफू जुधेर आफैँ सकिने निश्चित छ । अब लोकतन्त्र नै अन्तिम लक्ष्य ठानेर यसैैमा लडिरहने कि जनवाद तर्फ अघि बढ्ने भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।
रुसको विकास र चीनको समृद्धि देखेर विश्वमै कम्युनिज्मप्रति आकर्षण बढेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन । तर नेपालमा न त नेतामा कम्युनिस्ट सिद्धान्त अनुसारको आचरण देखियो, न त राजनीतिक चालचलन बन्न सक्यो, न त गरिब र निमुखाको जीवनस्तर नै माथि उठ्न सक्यो । देशमा ७० प्रतिशत भन्दा बढी धेरै न्यून आय भएका र गरिब जनताको भावनालाई ग्रहण गर्न सकेन । जनताको विश्वास र भावनामा जहिले पनि ठेस पुर्‍याउने र वञ्चित पार्ने काम मात्र भयो । जनता मध्येका सबैभन्दा कम आय हुनेहरूलाई वास्तै नगर्ने (उपेक्षा गर्ने), मध्यमवर्गीय जनताका एक तप्का बेरोजगारहरूलाई आफ्ना पछि लगाउने र झन्डा बोकाउने काम मात्र भयो । बेराजगारहरू पनि के गरुन् नेताका पछि लाग्दा केही पाइन्छ कि भनेर पछि पछि जयजयकार गदै हिँडिरहे ।
देशमा बेरोजगारीले हाहाकार मच्चाए पछि र दैनिक गुजारा गर्नै धौ धौ भए पछि जनतामध्ये केहीले अरु विकल्प नदेखी कोही तस्करीमा संलग्न भए, कसिमसनखोरीमा लागे, कोही दलालीमा लागे । यसै कारणले देशमा अपराधिकरण बढ्यो । देशमा भएका प्राकृतिक रोगजारीका क्षेत्रहरू लोप हुँदै अनैतिक र अस्वस्थ तरिकाका माध्यमहरू प्रयोग गर्न थालियो । नेताहरू यी सब वास्तै नगरी आफ्नो सत्ता टिकाउन, सत्ताको वरिपरि रहन र राजनीतिक विकृति बढाउन राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग गरिरहे । सत्ताकेन्द्रित राजनीति, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सांसद खरिद बिक्री जस्ता निर्लज्ज अलोकतान्त्रिक अभ्यासहरूले गर्दा प्रजातान्त्रिक कालमा प्रजातन्त्रलाई सबै भन्दा बढी बदनाम गरियो । यसपछि देशमा सशस्त्र यु्द्ध सुरु भयो ।
संसदीय पद्धतिको यो घिनलाग्दो कर्तुत अन्त्य गर्न अर्को वामशक्तिले देशमा अर्को उधुम मचायो । देशमा बढेको अशान्तिका बिचमा वैदेशिक रोजगारी खुलेपछि युवाहरू पलायन गर्न लागे । यसपछि नेताहरू झन ढुक्क भए । विदेशले रोजगारी दिइहाल्छ, वैदेशिक रोजगारहरूको रेमिटले देश चलिजान्छ भनेर नेताहरूको ठाट बाट र शानमा झनै वृद्धि भयो, देशमा करबाट र रेमिटबाट पैसा प्रशस्त उठ्न थालेपछि राज्यमा एकातिर भ्रष्टाचारको मात्रा बढ्यो भने अर्कातिर नेताहरूको लापरवाही रवैया र राजनीतिक अपरिपक्वताले गर्दा भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमित अकल्पनीय रूपमा वृद्धि भई यसको नियन्त्रण हुन सकेन । न त भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्ने कुनै स्वतन्त्र निकाय बन्न सकेन । बने पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन सकेन ।
कृषि क्षेत्रलाई स्याहार र व्यवस्थापन गर्ने कुनै प्रभावकारी नीति नै नल्याई कृषि क्षेत्र तहसनहस भयो । देशमा कृषकहरू लगायत युवाहरूलाई श्रम बेच्न विदेश पलायन गर्न बाध्य पारेर नेपाली दलहरूले माफिया र दलालहरूलाई विकासको जिम्मा सुुम्पिने जस्तो घातक संंस्कारको सुरुवात भयो । कम्युनिस्टको चरित्र जनकल्याणकारी पूँजीवादी दल जत्तिको पनि रहेन । दलाल र माफियाको हाली मुहाली भए पछि व्यापारमा, जनताको प्रत्यक्ष सरोकार रहने हरेक क्षेत्रमा सिन्डिकेट छायो, नाफाखोरीको वर्चस्त चल्यो । एकातिर जग्गा बाँझो र अर्कातिर वास्तविक किसानहरू जग्गाबिहीन भएको अवस्थाले कृषिक्षेत्र चरम विकृतिको मारमा पर्‍यो । कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिमा अनियमित तरिकाले झ्वाटट् धन कमाइहाल्ने प्रवृत्ति बढ्यो ।
आकस्मिक आयप्रतिको यस्तो आकर्षणले गर्दा साबिकको काम र उद्यमले भन्दा गलत तरिकाले आय आर्जन गर्ने कुसंस्कारको सुरुवात भयो । यति हुँदा पनि नेपाली वामपन्थीहरूले यस्ता अवस्थाको मूकदर्शक बनेर जनतालाई फेरि फेरि झुक्याउने प्रपञ्चमा लागिरहे । फलस्वरुप तस्करी मौलायो, कमिसनखोरी उच्च मात्रामा बढ्यो । निजी क्षेत्रलाई उद्योग र कल कारखाना खोल्न उक्साउनु पर्ने ठाउँमा सरकारी संस्थान, मेडिकल, शिक्षामा लगानी गर्न दिइयो जुन विशुद्ध जनताको पहुँचमा हुनुपथ्र्यो, त्यो धनवान्हरूको पहुँचमा मात्र पुर्‍याउने काम भयो । यसरी सरकारी भनेपछि सबैलाई डुबाउँदै निजी संस्थान, मेडिकल र शिक्षाकेन्द्रहरूलाई उँभो लगाउने काम भयो । उद्योगीकरण र उत्पादनको क्षेत्र पूर्णतः उपेक्षित भयो जसको फलस्वरुप उद्योग कल कारखानाहरू तीव्ररुपमा बन्द हुन थाले । देशमा वामपन्थीहरूले नै यही अवस्थालाई मलजल गरिरहे । अनि अझै्र आफूहरूलार्ई दोषमुक्त ठानेका छन् । यही गर्नु थियो भने देशमा कम्यु्निस्ट नामको पार्टीको बिगबिगी चलाएर किन पाखण्ड रचियो ? देशमा कम्युनिस्टहरू हुँदा हुँदै यस्ता काम किन भए ? यसको जवाफ तपाईहरूसँग छ ?
नेपाली जनताको एउटा पुरै पुस्ता विकास, रोजगार, शिक्षा र सुशासनको पर्खाइमा नै बुढो भइसक्यो । जनतामा कति निराशा भरिसक्यो अनुमान गर्नुस् ।
व्यापारीहरू राजनीतिक दाताका रुपमा रुपान्तरित भएपछि राजनीतिले झन भद्दा रुप लियो । उनीहरूले जनतालाई महँगीको भारी सकेसम्म बोकाउन सफल भए । मूल्यवृद्धि अकासिएर स्वाभाविक आयले परिवार धान्न नसकिने अवस्था आए पछि अस्वाभाविक र अस्वस्थ तरिकाले आय आर्जन गर्नुपर्ने स्थिति आयो । यसले देशमा कानुनको उपहास र सामाजिक अराजकता झनै मौलायो । यसरी बेथिति र विकृतिको पर्याय बनेको नेपाली राजनीति अब सम्हाल्न नसकिने अवस्थामा पुग्यो । नेपाली जनताको एउटा पुरै पुस्ता विकास, रोजगार, शिक्षा र सुशासनको पर्खाइमा नै बुढो भइसक्यो । जनतामा कति निराशा भरिसक्यो अनुमान गर्नुस् । यसरी पुरै एक पुस्तासम्म तपाईहरूले कुनै न कुनै राम्रो राजनीतिक संस्कार बसाउन सक्नुभयो न त भौतिक रुपमा जनतालाई सन्तुष्ट पार्न सक्ने कुनै निर्माण गर्नुभयो । के लाग्छ, यो अवस्था किन उत्पन्न भयो ?
सिद्धान्त र दर्शनलाई मिल्काएर गरेको राजनीति पाखण्ड मात्र हुन्छ । यहाँ न त राजनीतिक संस्कारको जग बस्न सक्यो, न त देशमा विकास र प्रणालीका केही काम भए । अर्कातिर राजनीतिमा चरम विकृति र अराजकता, अस्थिरता मौलाउँदै गएर राजनीति भनेको कुर्सीमा बस्ने र खसाल्ने मात्र हो भन्ने फोहोरी खेलका संस्कारमा रुपान्तरित गर्नु भयो । त्यस पछि नेपाल झन पछि पर्दै गयो र आजको यो दुर्दशा र दु्र्भाग्यजनक परिदृश्य देखा परेको हो । नेपाली नेताहरूको मूल्यहीन राजनीतिले गर्दा नेपाली नेताहरू विदेशी प्रभुका गोटी बन्ने अवस्था भयो । सामाजिक र राजनैतिक वृत्तमा वैदेशिक चलखेल यति तीव्र भयो कि नेपाली अस्मितालाई जसले पनि चलाउन सक्ने भयो । नेपाली समाज अनुशासनहीन भयो । केही गर्न नसकेको लाछी, हुतिहारा, प्रभावित र अकर्मण्य राजनीतिले देशको सार्वभौमसत्ता र सीमाको समेत सुरक्षा गर्न सकेन । जनताहरूमा बढेको आक्रोश र असहयोगी भावना पनि अब विकराल समस्या बनेर नेतालाई डस्न थालेको अवस्था भइसकेको छ । अब तपाई कताबाट सुरु गर्नुहुन्छ निर्माण, विकास, व्यवस्थापन, सहयोगी वातावरण र संस्कारको प्रक्रिया ?
बिदेसिएका युवाहरूलाई नेपालमै रोजगारी गर्न आह्वान गर्नु हुन्छ भने उनीहरू नेपालमा अब रोजगारी गर्नेवाला छैनन् । किनभने तपपाईहरूले उत्पन्न गरेको महँगीको यो मारमा नेपालको कमाइले खर्च धान्न नसकिने अवस्था भएको छ । विदेशमा आकर्षक आय छोडेर यहाँ काम गर्ने कल्पनासम्म पनि युवाहरू र श्रमजीवीहरू गर्दैनन् । अब के सधै नेपालले युवाहरूलाई विदेश पठाएर रेमिट्यान्सले मात्र देश धान्ने योजना छ ?
एउटा सामान्य उद्योगसम्म स्थापना गरेर चलाउन नसक्ने असक्षम राजनीतिक सत्ताले नागरिकमा बढ्दै गएको असुरक्षा र आक्रोश कसरी धान्न सक्छ ? यो आक्रोश, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि, विकृत कर्मचारीतन्त्र, कृषकहरूको दयनीय अवस्था, विकृत राजनीतिक खेल, वैदेशिक रोजगारीको बाध्यता, सीमा क्षेत्रको तनाव, छिमेकी मुलुकको असमान व्यवहार, नेताहरूको झुट र गुटको राजनीति, अहङ्कार, शक्तिको पूजा आदि भए भरको विकृति कहिलेदेखि स्याहार्न थाल्ने र कताबाट थाल्ने ? जता पनि भ्वाङ भएपछि पहिला कुन दुलो टालेर पानी जमाउने ? यस्तो बेलामा तपाई नयाँ पार्टी खोलेर मुलुकको विकास गर्छु, देशमा समृद्धि ल्याउँछु भनेर प्रतिज्ञा गर्दा कतिसम्म पत्याउने ? कसरी पत्याउने ?
कमरेडहरू, तपाईहरूले देशलाई असफल पार्न कुनै कसर बाँकी राख्नु भएन । देशै असफल हुने लक्षण र अवस्थाको विश्लेषण गर्न नभ्याउनु भएको हो कि त्यो अवस्थालाई कल्पना गर्न नखोजेको हो ? कि अझै ढाँटेरैै राजनीति गर्र्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? सोच्नुहोस्, राजनीतिमा अनैतिकता र अनुशासनहीनता अकल्पनीय रूपमा देखा परेकोे छ । जनतामा कानुनको धज्जी उडाउने वातावरण राजनीतिक दलहरूले यति मात्रामा गरिसके कि देशमा चरम अराजकता पैदा भइसकेको छ । नेपालमा सार्वभौमसत्ताको असुरक्षा र वैदेशिक हस्तक्षेप यति भयङ्कर भइससकेको छ कि यो देश अर्को ठुलो देशमा मर्ज हुने बाहेक अरु केही हुने देखिँदैन । जनतामा वर्तमान पद्धतिप्रति यति वितृष्णा फैलिसक्यो कि लोकतन्त्रपप्रति नै खतरा हुने अवस्था देखिन थालेको छ । नेताहरूले न त जनवादको कुरा गर्छन् ! अब जनवादको आधार तयार गर्न लाग्ने कि लोकतन्त्रलाई नै बलियो बनाएर अघि बढ्ने ? यसको विश्लेषण गर्नुभएको छ कि छैन ?
सारमा प्रगतिशील धारमा रहे पनि नेपाली कम्युनिस्ट नेताहरू संस्कारमा परम्परावादी छन् । प्रगतिशील धारमा रही परम्परावादी र पुरातन चरित्र बोकेर कहीँ पुगिँदैन ।
सारमा प्रगतिशील धारमा रहे पनि नेपाली कम्युनिस्ट नेताहरू संस्कारमा परम्परावादी छन् । प्रगतिशील धारमा रही परम्परावादी र पुरातन चरित्र बोकेर कहीँ पुगिँदैन । यो हास्यास्पद चरित्र हो । यी विसंगत चरित्रका नेपाली कम्युनिस्टहरू अब विश्वास गुमाएर विलुप्तिको बाटो लाग्ने कि ? सच्चिएर लोकप्रिय काम गरेर नेपाली वामपन्थी शक्ति, देश र जनतालाई न्याय दिने ?
प्रगतिशील भएर धर्ममा चासो र मन्दिरका कुरा गरेर विवादित हुने, लोकतन्त्रको नाम जपेर अलोकतान्त्रिक गतिविधि गर्ने, स्वार्थ जोडिएको भए निर्लज्जताकोे सीमा नाभेर सिद्धान्तविरोधी आचरण देखाउने, समाजवादीको लेबल टाँसेर माफिया र पूँजीवादीको पक्षमा काम गर्ने, सत्ताबाहिर एउटा र सत्तारुढ हुँदा फरक व्यवहार र चरित्र देखाउने, गुटबन्दी गर्ने, अर्को तप्कालाई धुलो चटाउने भाषण गर्दै तानाबाना बुन्दै हिँड्ने आदि सामन्ती, चरम अवसरवादी, पूँजीवादी र चरम पाखण्डी चरित्र हो । यस्तो राजनीतिक ढोँगी चरित्रले कुनै पनि राजनैतिक पार्टीले देश र जनतालाई विकासतर्फ लम्काउन सक्दैन । यस्तो प्रवृत्तिले अन्ततः पतनतिर लैजाने स्पष्ट छ । अझै पनि आचरण र व्यवहारमा पुरातन, अनुशासनहीन र परम्परागत तथा पूँजीवादी विशेषता बोकेर चल्ने हो भने चाँडै नै नेपाली कम्युनिस्ट र वाम राजनीतिको अस्तित्व बिलाउने छ । कम्युनिस्ट नेताहरू कि त राजनीतिक रुपमा ह्रास भएर जानेछन् कि जनताको आक्रोशको सिकार हुनेछन् । यस्ता बेलामा पनि आफूमा, पार्टी र रणनीतिक तरिकाले कमी कमजोरी र समयले गरेको खबरदारीप्रति वास्ता गरेनन् भने इतिहासमा सीमित हुन तयार रहन समयले चेतावनी दिइसकेको छ ।